Wasiirka Gaashaandhiga oo sheegay in la dhameystiray qorshe lagu weerarayo deegaano ay ka mid tahay Baraawe | Salaan Media
Wasiirka Gaashaandhiga oo sheegay in la dhameystiray qorshe lagu weerarayo deegaano ay ka mid tahay Baraawe
Wasaarada Gaashaandhiga Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in la dhameystiray qorshayaal ku wajahan sidii deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab looga saari lahaa, kadib shir shalay muqdisho ay ku yeesheen Madaxweynaha Soomaaliya iyo Saraakiisha ciidamada Milateriga.
C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya ayaa sheegay inuu socdo qorshe lagu weerarayo deegaanada Al-Shabaab dalka kaga sugan tahay, si looga xoreeyo.
Wasiirka oo la hadlayay Idaacada afka dowladda ku hadasha ee Radio Muqdisho ayaa sheegay in aanay marnaba ka gaabin la dagaalanka Al-Shabaab oo uu xusay inay tahay koox Argagixiso oo dhib weyn ku heysa shacabka.
“Ciidamada iyo wasaaraduba marnaba kama gaabinin la dagaalanka argagixisada Shabaab, waana waajibka ugu weyn ee na saaran, hadana howlgalada lagu xoreeyay Mahadaay, Buurane iyo Biyocade waxey salka ku hayeen waajibaadkaasi anago dhan na saaran”ayuu yiri Wasiirka Gaashaandhiga C/xakiin Fiqi.
C/xakiin Fiqi ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada mushaaraadkooda 100% loo dhameystiri doono, isla markaana dhowaan ay heli doonaan qalabkii iyo gaadiidkii ay u baahnaayeen si Al-Shabaab uga xoreeyaan deegaanada dalka.
Wararka qaar ayaa sheegaya in kulankii shalay lagu soo qaaday sidii degmada Baraawe oo ka tirsan Shabellaha Hoose oo ah halka ay ku xoogan tahay Shabaab loo weerari lahaa, iyadoo ciidamada dowladda iyo AMISOM ku sugan yihiin qeybo ka mid ah Gobolka Shabellaha Hoose.
Dhinaca kale Wasiirka gaashaandhiga oo ka hadlay weerarkii Ciidamada Kumandoska Mareykanka ku qaadeen degmada Baraawe uu ahaa mid qorshihiisa ahaa in la soo qabto ama la dilo Sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab.
Mr Fiqi ayaa sheegay in aanay marnaba joogsan doonin howl galka lagu bartilmaameedsanayo Saraakiisha Al-Shabaab iyo Al-Qaacida, isagoo cadeeyay in dalalka ay iskaashiga ka leeyihiin dhinaca amniga ay ka qeyb qaadan doonaan howl galkaas.
Habeenkii Sabtida ayay aheyd markii Ciidamo gaarka Mareykanka ay weerareen guri ku dhow xeebta Marka, iyadoo weerarkaas uu noqday mid fashilmay, markii iska caabin xoogan ay kala kulmeen Ilaalo adag oo guriga ku sugneyd.